उन्नतिको आइपीओमा ५२.६२ गुणा बढी आवेदन, अब कतिले पाउने भयो सेयर ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » उन्नतिको आइपीओमा ५२.६२ गुणा बढी आवेदन, अब कतिले पाउने भयो सेयर ?
काठमाडौं - उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको आइपीओमा ५२.६२ गुणा बढी आवेदन परेको छ । अहिलेसम्मको विवरण अनुसार यो आइपीओमा २ लाख ४५ हजार जना लगानीकर्ताले ७९ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरकोे आवेदन दिएको बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलका मर्चेन्ट बैंकिङ प्रमुख सुजनबाबु अधिकारीले बताए । यो माग भन्दा ५२.६२ गुणा बढी हो ।
गोलाप्रथाबाट न्यूनतम १० कित्ता सेयर बाँडफाँट गर्दा १५ हजार १५ जना लगानीकर्ताले मात्र सेयर पाउँछन् । यसआधारमा, कुल अवेदकमध्ये ६.१२% ले मात्र उन्नतिको आइपीओ पाउने देखिएको छ । कम्पनीले जारी पुँजीको ३०% आइपीओ बिक्री गरेको हो । यो माइक्रोफाइनान्सको केन्द्रीय कार्यालय रुपन्देही जिल्लामा रहेको छ । माइक्रोफाइनान्सको हाल १० जिल्लामा २७ वटा शाखा कार्यालयहरु सञ्चालनमा छन् ।